”ငွေ”ဆိုတာ ပထမ ”ဘုရားသခင်”လို့ ယုံကြည်မိတဲ့အခါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » ”ငွေ”ဆိုတာ ပထမ ”ဘုရားသခင်”လို့ ယုံကြည်မိတဲ့အခါ	10
”ငွေ”ဆိုတာ ပထမ ”ဘုရားသခင်”လို့ ယုံကြည်မိတဲ့အခါ
Posted by Thint Aye Yeik on Feb 26, 2016 in My Dear Diary | 10 comments
ညစ်ညစ်ပတ်ပတ်မဟုတ် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လည်း ရှိလို့ စားကောင်းမယ့်ပုံလည်း ပေါက်တယ်။
အားရပါးရ တမုန်းဝင်ဆွဲမယ်ကွ လို့ တွေးပြီး ထိုင်ခုံကို ဆွဲထိုင်ဖို့လုပ်တယ်။ ထိုင်ခါနီးမှ ဖျတ်ခနဲ စဉ်းစားမိတာက. . .
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ ပိုက်ဆံဘယ်လောက် ရှိလဲ?
ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာ အကြွေ ခြောက်ရာ(မြန်မာငွေ ၆၀၀ တိတိ)ပဲ ရှိတော့ပါလား။
ဟုတ်သားပဲ။ ငါ့နှယ်. . .စုထားတာလေးတွေ ကုန်သွားမှာ စိုးလို့ ရှိတာနဲ့ပဲ ချွေတာ သုံးနေတာ. . . .
ဒါပေမဲ့ အခု စားချင်မိလို့ ဝင်စားတော့မလို လုပ်မိတာက ”ဝက်သားဒုတ်ထိုး”လေ။
ဒီတစ်ခါတော့ သွားရည်လည်းတမြားမြားကျနေတုန်း စးလိုက်ပါမယ်လေ ဆိုပြီး. . .
အနီးနားမှာ KBZ Bank – ATM စက်များ ရှိမလားလို့ လှည့်ပတ်ရှာကြည့်တယ်။ မရှိ။
ဘေးမှာ ရပ်နေတဲ့ Taxi ကားသမားတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တယ်။ မရှိ ရေးချ မရှိ။
(မျှော်လင့်ချက်တို့ ဝုန်းခနဲ ပြိုကျ. . .
ကျနေတဲ့ စားချင်စိတ်သွားရည်တွေ ပြန်သိမ်းရမလိုလို / ဆက် ကျရမလိုလို ကို့ယို့ကားယားဖြစ်)
မစားရေးချ မစားဘူး ပေါ့ကွာာာာာာာာ !!!!
အဲ့လိုနဲ့ သောက်ရမ်းသောက်ရမ်း သွားရည်ကျပြီး စားချင်နေပါလျက်နဲ့
(အမှန်တော့ ပိုက်ဆံသာ အလွယ်တကူ ရှိနေရင် စားမိမှာ သေချာသလောက်မို့ အဲ့စိတ်ဓါတ်ကိုလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို စိတ်ဓါတ်ပြတ်သားလှပါပြီလို့ ဂုဏ်မယူရဲတဲ့အပြင်/ကိုယ့်ကိုကိုယ် မကျေမနပ်ဖြစ်ရင်း) ဝက်သားဒုတ်ထိုးကို မစားဘဲ
လှည့်ထွက်ခဲ့တဲ့ တစ်ညနေ. . .
ကျွန်တော့်ဘဝမှာ ရှိခဲ့ဖူးတယ် လို့. . .
ဒိုင်ယာရီမှာ ချရေးမယ်ဗျာ. . .
ခင်ဗျား. . .
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ရော်
သူများတွေ ဝိတ်ဂိန်း ဖြစ်နေချိန် နင်က ဒုတ်ထိုး ဆာပြနေတော့
ပွင့်နဲ့ပြတ်ပြီး ချမ်းချမ်းနဲ့ တွဲရသလို
အမျိုးအမည်မသိ ခံစားမိပါတယ် ဆတ်ဆတ်ရယ်
လမ်းကြုံရင် ဆင်မလိုက်ကို လာခဲ့ပါကွယ်
ခင်ဇော် says: အေးးလေ
ပြော့ လိုက် ဇမ်းးး ဘာာာာ
နာ့ ကို ရွဲ့ တာလားးလို့စ်…!! ဆက်ဆက်
နိ ပြောမှ နာ သတိရတယ်…
နာ ဝိတားးဒုတ်ထိုးး မစားးးခဲ့ ရဘူးးးးး
Thint Aye Yeik says: *ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E)
ဘီအီးနဲ့ ဝက်သားဒုတ်ထိုး မြည်းလျှင်…. လိုက်ဖက်ညီသလား… မညီဘူးလား…
* မမဂျီး @ ခင်ဇော်
မမဂျီးနဲ့ ဝက်သားဒုတ်ထိုးကတော့… သိပ်လိုက်တာပဲ…
ဦးဦးပါလေရာ says: အနားမှာ ATM စက်မရှိတာ ကံကောင်းသွားတာပေါ့…
၁-ATM ကဒ်လေးထိုးထည့်ပြီး ငွေထုတ်ဖို့ကြိုးစားမယ်
၃-အဲဒါနဲ့ ကဒ်လေးမြန်မြန်ပြန်ထုတ်ပြီး ကဒ်ထဲက ငွေဖြတ်သွား/မသွား သေချာအောင်စစ်ဖို့ နောက်ထပ် ATM စက်တစ်လုံးကိုလိုက်ရှာရမယ်..
၄-အဲ့ နောက်စက်က သက်တန့်တံဆိပ်လေးဆိုရင် ကွမ်းတစ်ယာညက်လောက်စောင့်ပြီးမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လို့မရပါ ဆိုတဲ့စာတမ်းလေးပေါ်လာမယ်
၅-နောက်စက်က ထိပ်ချွန်တံဆိပ်လေးနဲ့ဆိုရင် ကဒ်ပါသိမ်းသွားလို့ အဲ့ဘဏ်ကို ပျာယိပျာယာဆက်သွယ်ပြီး သုံးရက်စောင့်ပြီးမှ ရုံးချုပ်မှာသွားထုတ်ရမယ်..
၆- အဲဒါတွေအပြီးမှာ ၀က်သားဒုတ်ထိုးကိုရော အေတီအမ်ကိုပါ တစ်သက်လုံးစိတ်နာသွားမယ်..
kai says: လူတိုင်းသူ့အထွာနဲ့သူ.. ဖြစ်ပါတယ်…။
ကျုပ်ဆိုလည်း… ဘူဖေးသွားပြီးစားပါတယ်ဆိုမှ.. အလကားကြိုက်သလောက်စားလို့ရတဲ့စနိုးခရပ်ခြေထောက်တွေ… ကြည့်ကြည့်ပြီး… ခြေ၂ချောင်းလောက်စား.. အရွက်တွေချည်းနင်းကန်မြိုချပြီး… ပြန်လာရတာမနည်းဘူး..
ပြိဿာလို့ခေါ်ရမယ်ထင်တယ်.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
ခင်ဇော် says: ပြိတ္တာ ပါအေရယ်..
ခင်ဇော် says: စာလုံးပေါင်းကို ပြောဒါနော်
Ma Ma says: (စာလုံးပေါင်းကို ပြောဒါနော်) ကွန်မန့်ပြန်တာမြန်လို့
အောင် မိုးသူ says: ငါတို့အိမ်နားက ၀က်သားဒုတ်ထိုးဆိုင်ကိုလာ ကြီးတယ် ဈေးမကြီးဘူး အရသာကောင်းတယ်
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .ကိုယ်လည်းဘာကဒ်မှမသုံးဘူး..ရှုပ်လို့..ငွေပဲစိတ်ချတယ်